खेलकुद Archives - Page6of 14 - Dna Nepal
तेन्दुलकरको रेकर्ड तोडेपछि भारतीय मिडियामा रोहित पौडेलको चर्चा १३ माघ २०७५, आईतवार ०३:४४
काठमाण्डौं, माघ १३ । शनिबार युएईविरुद्धको खेलमा अर्धशतक बनाउँदै रोहित पौडेलले सचिन तेन्दुलकरको विश्वकीर्तिमान तोडेपछि भारतीय मिडियामा चर्चा भइरहेको छ । पौडेलले १६ वर्ष १४६ दिनको उमेरमा अर्धशतक पूरा गर्दै अर्धशतक बनाउने विश्कै सबैभन्दा..
रोहित र सोमपाल चम्किँदा नेपालको युएईमाथी सानदार जीत १२ माघ २०७५, शनिबार ११:४२
पोखरा, माघ ११ । दोश्रो एकदिवसीय क्रिकेटमा नेपालले युएईमाथी सानदार जीत हात पारेको छ । शनिबार भएको दोश्रो खेलमा १ सय ४५ रनको फराकीलो अन्तरले युएईलाई पराजीत गरेको हो । योसँगै नेपालले ३ म्याचको सिरिजमा १ खेल जितेको छ । युएईले पनि १ खेल जितेको थियो ।..
विश्व क्रिकेटमा नेपाली क्रिकेटर रोहितको नयाँ रेकर्ड, सचिन र शाहिद पनि पछि परे
काठमाण्डौं, माघ ११ । सचिन तेन्दुलकर र शाहिद अफ्रिदी अन्तराष्ट्रिय क्रिकेटका लेजेन्ड हुन् । तर, नेपालका युवा ब्याट्सम्यान रोहितकुमार पौडेलले शनिबार यूएईविरुद्ध अर्धशतक बनाएसँगै दुबै लेजेन्डलाई पछि पार्दै दुर्लभ रेकर्ड बनाएका छन् ।..
सहारा युकेको अध्यक्षमा कुमार गुरुङ निर्वाचित ७ माघ २०७५, सोमबार १६:२६
पोखरा, माघ ७ । सहारा युकेको नयाँ अध्यक्षमा कुमार गुरुङ निर्वाचित भएका छन् । युकेमा भएको छैठौं अधिवेशनबाट गुरुङको अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति चयन भएको हो । समितिको उपाध्यक्षमा कुशाङ गुरुङ, महासचिवमा धनु थकाली, सचिवमा बाचस्पती रेग्मी,..
कसले बनाउँछ पोखरा रंगशाला ?, केन्द्र सरकार भारततिर–प्रदेश सरकार चीनतिर २५ पुष २०७५, बुधबार ०३:०३
प्रकाश ढकाल पोखरा, पुस २५ । १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) लाई लक्षित गरि संरचना निर्माणका लागि अघिल्लो बर्ष भत्काईएको पोखरा रंगशाला अहिलेसम्म खण्डहर छ । अघिल्लो बर्ष रंगशालामा हुने मुख्य प्रतियोगिता आहा रारा गोल्डकपलाई नै प्रभावित पार्ने..
घलेल खुला भलिवलको उपाधी धम्पुसलाई २४ पुष २०७५, मंगलवार ०७:२१
पोखरा, पुस २४ । कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिका ८ स्थित घलेल गाउँमा सञ्चालित खुला भलिवल प्रतियोगिताको उपाधी मिलन यूवा क्लव धम्पुसले जितेको छ । आइतबार भएको फाइनल खेलमा आयोजक बौद्ध सिर्जना यूव क्लव घलेललाई पराजीत गरि धम्पुसले उपाधी जितेको हो..
प्रधानमन्त्री कार्यालयभित्रै लुँडो खेलको प्रतिश्पर्धा १० पुष २०७५, मंगलवार ०२:०९
काठमाण्डौं, पुस १० । आइतबार दिउँसो २ः३० बजे । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयकी एक महिला कर्मचारी मोबाइलमा लुँडो खेलिरहेकी थिइन् । खेलअनुसार उनको अनुहारको हाउभाउ बदलिन्थ्यो । कहिले खुसी हुन्थिन्, कहिले दुखी । उनको कम्प्युटर ‘अन’..
पोखरा रंगशाला सजाउन खेतबारीको दुवो खोज्दै एन्फा २ पुष २०७५, सोमबार १४:५२
पोखरा, पुस २ । कास्की जिल्ला फुटवल संघले पोखरा रंगशालाको फुटवल मैदानलाई हरियो पार्न पोखरा क्षेत्रका खेत वारीबाट दुवो खोज्दै फुटवल मैदानमा रोप्न थालेको छ । आउदो माघ महिनाको १५ देखि २६ गतेसम्म पोखरा मनकामना कप फुटवल प्रतियोगिता गर्ने भएपछि संघले..
मेस्सीको अद्भुत प्रदर्शन, पेलेदेखि बालून दोरसम्मलाई गज्जबको जवाफ !
एजेन्सी, पुस २ । हिजोको खेल खेल्नुअघि सेभिया र एट्लेटिको मड्रिडसँग बार्सिलोनाको बराबरी अंक थियो तर लियोनेल मेस्सीको तीन गोल र दुईवटा शानदार असिस्टपछि क्लब तीन अंकको अग्रताका साथ ला लिगाको शीर्ष स्थानमा पुगेको छ । लेभान्तेविरुद्ध ५–० को..
‘ब्यालोन डी’ओर अवार्ड’ विवादमाः कहाँ हरायो मेस्सीको भोट ? १९ मंसिर २०७५, बुधबार १६:१२
एजेन्सी, मंसिर १९ । विश्व फुटबलको बहुप्रतिष्ठित पुरस्कार ‘ब्यालोन डी’ओर अवार्ड’ सोमबार राती मात्र क्रोएसियाका कप्तान एवं रियल म्याड्रिडका स्टार लुका मोड्रिचले जिते । विश्वका एक सय ८० देशका पत्रकारको भोटका आधारमा प्रदान गरिने यस अवार्ड..